Tooshka tabaruca: Bixinta maalintii, ka shaqaynta cusbitaalka habeenkii - Cunnooyinka ku socda wheels
Iftiinka Mutadawacnimada: Is gaarsiinta maalinlaha ah, ka shaqeynta cisbitaalka habeenkii
Maadaama uu yahay maareeye meeleyn bukaan oo isbitaal maxalli ah iyo wadaha cunnada ee Cunnada joogtada ah, Jeff Hagadorn wuxuu daryeelayaa bulshadiisa.
Jeff wuxuu ahaa wade kaxaynta cuntada ee CES Meals on Wheels ee Minneapolis in ka badan 10 sano. Wuxuu geyn jiray usbuuciiba hal jeer kahor cudurka safka faafa, laakiin wuxuu usocday inuu geeyo seddex jeer usbuucii markii CES ay ubaahantahay darawalo badan si ay u keenaan cunnooyinka dheeraadka ah ee qabow.
Isagoo ka shaqeeya is-beddelka fiidkii Isbitaalka M Health Fairview, wuxuu xor u yahay inuu tabaruc ugu shaqeeyo sidii loogu baahdo maalintii. Intii uu ku gudajiray kala fogaanshaha nabdoon inta lagu gudajiray dhalashadiisa, wuxuu dareemay dadka uu u geeyo inay sifiican ugu mahadcelinayaan booqashooyinkiisa marka lagu daro cuntada.
"Waxaan dareemi karaa go'doonka bulshada," ayuu yiri Jeff. Waxay raadinayaan nooc xiriir ah maxaa yeelay ma helaan xiriir. Qof walaalkiis ah baa u yimid oo soo booqda, walaalku mar dambe ma iman karo oo ma booqan karo. ”
Jeff wuxuu sheegay inuu sidoo kale ka faa'iideysto inuu banaanka u bixi karo oo caawin karo deriskiisa xilligan adag. “Habka aad u ilaalin karto caafimaadkaaga maskaxda waa inaad ka dhigto waxyaabahaaga joogtada ah inay socdaan,” ayuu yidhi, isagoo xusay inuu sidoo kale hubiyey inuu si caadi ah ula bixi doono eeygiisa.
Sanadihii la soo dhaafay, Jeff wuxuu ku qiyaasayaa inuu qabtay 18 marinno kala duwan oo gaarsiinta. "Waxaan hayaa waddooyin aan aad u jeclahay oo aan sameeyo maxaa yeelay waxaan bartay dadka ku nool waddooyinkaas," ayuu yidhi. “Waa wax lagu farxo. Waxaan haystaa shahaado taariikhda ah si aan ula hadlo dadka waaweyn. Waxaan heystaa hal koox oo howl gab ah oo aan ka hadli doono baseball, waxaan ka hadli doonaa arrimaha siyaasada daqiiqad. ”
Waxaan salaamaynaa Jeff iyo dhammaantiin kuwa kaqeyb qaadanaya doorkiina si ay u sii wado gaarsiinta cuntada marka ay aad ugu baahantahay.
Waad ku taageeri kartaa shaqada dadka sida Jeff ay qabtaan inta lagu gudajiray dhibaatada COVID-19 adigoo ku deeqaya Cuntada Lugaha, u sameynta ama ku deeqida waji-gashiga mutadawiciinteenna ama isdiiwaangalinta si aad u noqoto tabaruce wicitaan.
Abriil 23, 2020